I-Emirates Airlines Careers - i-Global Airway Jobs-Faka i-CV namhlanje!
I-Emirates Airlines Careers - uLayisha kwakhona namhlanje!
Imisebenzi yaseQuikr e-Hyderabad, eMumbai naseKhennai
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Septemba 30, 2018
I-Emirates yeenqwelomoya yeenqwelomoya nge Inkampani yeSixeko sase Dubai isikhokelo. Ngokubanzi, sibhalela isithuba semisebenzi yeAirways jikelele. Kwaye ukusukela emhlabeni wakho. Kuya kufuneka uhambele amacandelo enkampani yethu. Funda ulwazi lwethu ngemisebenzi. Kwaye jonga indlela iqela lethu le-HR elinokukunceda ngayo ufumane umsebenzi namhlanje. Ewe, ingqesho iyahamba ingakhange ithi icandelo lokukhula ngenqwelo moya likhula ngokukhawuleza. Ngokuqinisekileyo unokukuqesha. Eyona nto ibalaseleyo yeenkampani Ngaphezulu kwama-400 amabhaso wamazwe aphumeleleyo. Kwaye inqanaba labo kunzima kakhulu ukulinyusa. Kwicala elifanelekileyo, uninzi lokuqina aluphumeleli le meko ngaphandle kokuchazwa kwamanye amazwe. Umzekelo wabasebenzi abakumgangatho wehlabathi abavela eIndiya nasePakistan.
Ngelixa usebenza kwi isikhululo okanye neenqwelomoya. I umsebenzi omtsha uya kufunda izakhono ezininzi ezitsha. Kwaye ngokuqinisekileyo, zonke ziya kubaluleka. Unyaka nonyaka, i-Emirates i-airlanes yomsebenzi wokukhupha abaphathi. Ngokuqinisekileyo ibhiyozela ixesha layo lokujoyina iinkampani. Kuba ukusukela xa ujoyina inkampani. Ngokuqinisekileyo umakisha indlela ophila ngayo. Ayisebenzi. Kuba yinkqubo yexesha elide. Umzekelo kwikota yokuhlangana kwilizwe jikelele. Kwicala elifanelekileyo, impumelelo kunye nokukhula okumangalisayo. Umzekelo, I-Etihad kunye ne-Qatar Airways ihamba ngokukhethekileyo. Kwelinye icala, iqela le-Emirates minyaka le. Ukubonelela ngengxelo yokuba inzuzo eyonyukayo ye-yezigidi zezigidi. Kwaye ukuya phambili, kunyaka mali olandelayo.
Ukusebenzisana neenkampani zeAyirlines ezifanelekileyo
Ngaba a career Ngaba ukufanele ukuba nombutho wenqwelomoya? Indlela yabo yamandla njengomntu ofuna umsebenzi we-Emirates uyakholiswa nguwe? Ukuba impendulo yakho ngu-ewe? Wamkelekile iprofayile yakho kwinkampani yethu eDubai. Ukongeza, siyakukhuthaza ukuba ufunde ngakumbi malunga neyethu dubai Inkampani yeSixeko. Ngokwesiqhelo kuthetha ukuba maninzi amathuba emisebenzi. Umzekelo, ungandwendwela kwiZiko leMisebenzi ye-Emirates Group. kwaye Icandelo lomsebenzi we-Air Arabia.
Ke sijonge phambili ukukunceda. Kuba sikumgangatho ophezulu ojikeleze iinkampani. Ukusebenza kwiifemu zeAirlines. Uya kudinga ukuba nenkampani iyathetha yonke into enika umsebenzi. Kukho iinkampani ezininzi ze-Emirates eziqeshayo. Kwaye oku engqondweni, unokujoyina iifemu ezininzi. Kukho uluhlu lweenkampani esizenzileyo. Kwaye ukudibanisa nabo kuya kuba umbono olungileyo kunabo bafuna umsebenzi. Ke njengombandela wenyani ukuba ufumana imisebenzi kwiifemu zeAirlines iya kuba sisiqalo esihle. Sibonelela ngale misebenzi ngeenxa zonke UAE. Ngaphezu koko, Indoneshiya, I-Kuwait kunye nase-Singapore. Ngalo lonke ixesha unceda iinkampani ukuba zikhule kwaye zifumane iziphumo.
Qala nge-Jet Airways Careers abasebenzi basehlabathini
Ukuqala imisebenzi ye-Emirates yeenqwelo moya. Ungalibali Kufuneka ube unamava amaninzi. Ingakumbi yeyamazwe aphesheya imisebenzi yomoya. NanjengoMbindi Mpuma kunye naseAsia. Kwelinye icala, eYurophu nakwinkampani zaseMelika zibonelela ngenkxaso noqeqesho olupheleleyo. Sikhankanya iJet Airways Careers abasebenzi basemhlabeni njengeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana umsebenzi. Okwangoku banayo imisebenzi embalwa yokufaka isicelo. Abameli bethu be-HR. I-Emirates yeenqwelomoya yeenqwelomoya nge Dubai City Inkampani. Siqinile ukucebisa ukuba uqale umsebenzi we-Arline apho.
I-Jet Airways Umsebenzi wabaSebenzi bomhlaba - Yiba ngumsebenzi kunye nale nkampani!
IiNkampani eziLungileyo kwiiLebhuthi zaseKhaya
Air Arabia kunye neQatar, eSingapore nase-Etihad
I-Air India kunye ne-cabin crew jobs - iifom zezindiza ze-Emirates
Faka i-CV kwimisebenzi yeFlyDubai nakwimisebenzi yokuHamba ngeNdiza yaseKuwait. Ngapha koko, iSky Airlines kunye nemibutho emininzi yokuqasha. Ngokubanzi, inkampani yethu ye-HR ilapha ukuze ikuncede. Kwaye fumana amathuba emisebenzi emangalisayo kwingingqi yeGulf okanye kuMbindi Mpuma. Sinezithuba ezininzi zabasebenzi bamanye amazwe kunye nabaphathi abaphezulu. Njengo ukubonelela ngeenkonzo zokukhangela umsebenzi kubantu baseIndiya kunye nePakistan. Kwicala elifanelekileyo kunye Qatari kunye Abasebenzi base-Saudi Arabia ziyabetha iqela lethu lolawulo. Ke, nceda usithumele kwakhona kwinkampani yethu okanye kwiinkampani eziqeshayo ngezantsi kwaye ulinde imisebenzi emangalisayo ukuba ize kwaye qalisa ukuhlala ephupha i-Airline iphupha. I-Emirates yeenqwelomoya yeenqwelomoya nge Inkampani yaseDubai City ilinde wena!.
Faka i-CV kwimisebenzi yeFlyDubai nakwimisebenzi yokuHamba ngeNdiza yaseKuwait. Silapha ukuba kukunceda ufumane amathuba emisebenzi emangalisayo kuMbindi Mpuma. I-Emirates imisebenzi yeenqwelomoya ngeenkampani zeDubai City Inkampani ngoku eqala udliwanondlebe. Sinezithuba ezininzi zabafuna umsebenzi bamanye amazwe. Njengabantu abavela eIndiya nasePakistan nakwiQatar. Thumela ukuphinda uqalise kwinkampani yethu okanye kwiinkampani ezingezantsi.
Dubai City Inkampani & Uluhlu lweenkampani kuSebenzi!
Ii-airways ezilungileyo kwihlabathi ukusebenzela!
Enye yezona ntlangano zilungileyo zisebenza kwihlabathi. Kukusebenzela iinkampani zeAirlane. Kwicala elibi, azikho moya iindiza ezibi ehlabathini. Kuba sibasebenzisa ngalo lonke ixesha. Ke, ukumakisha kuhlala kushukuma. Ngale nto engqondweni, inkampani yethu ibonakalisiwe iinkampani zeenqwelomoya ukuba zisebenze. Kwaye yintoni imbuyekezo okanye umvuzo kwaye apho unokufumana khona udliwano-ndlebe lokuhamba-hamba. Ngokubanzi, abanye babo bayamangaza abafuna umsebenzi. Uninzi lweenkampani ingqesho kuMbindi Mpuma.
Ke, into onokuyenza ngeli candelo. Inkampani eqeshayo yesithandathu kwinkampani ifuna iziqwenga zolwazi. Dlala ulwazi oluphambili malunga nemisebenzi yecandelo lendiza enikezela ngayo. Ngaphezu koko, ngokubhekisele kumgangatho wenkonzo. Umntu unokujonga ukuba kufanelekile na ukufumana umsebenzi kwinkampani ekhombisiweyo. Kwelinye icala, ungabona ukusebenza komsebenzi. Kwaye apho unokufaka khona isicelo kunye nomsebenzi wasePhilippines. Ngapha koko, ibango lokulungisa imisebenzi livela phesheya. Kwaye ukuze kukhangelwe ukuba yintoni efunekayo emsebenzini kumanqaku ewonke. Ngale nkampani yemisebenzi yeenqwelomoya ye-Emirates. Ingcebiso nje kuwe baqesha abasebenzi baseRussia.
Izikhululo zeenqwelo moya ezibalaseleyo zibonisa ukuba eyona misebenzi ilungileyo inikezelayo. Kwaye ngale nto engqondweni, sithetha ngemivuzo. Ngapha koko, Inkonzo yabathengi yeyona nto iphambili kule misebenzi. Ke, akukho mfuneko yokuba ubonelele nge-CV yodumo ukuze ilunge. Konke okufuneka ukwenze kukucofa umfanekiso. Emva koko skrolela ezantsi ukuze ubone i-Qatar, Kuwait kunye neSingapore nge-UAE. Ezona moya zilungileyo ehlabathini zisebenzele imisebenzi yeenqwelo moya ze-Emirates. Kwaye sibalwa kwindawo elula yokuhamba ngokulandelelana ngokwamanqaku abo okubeka imisebenzi.
Eyona ndlela ingcono kakhulu imisebenzi yase-Airways emhlabeni jikelele!
Apha ngezantsi unayo indlela emfutshane yeenkampani Kuya kufuneka uthumele i-CV yakho. Kwaye unale nto engqondweni, skrolela ezantsi kwaye uya kubona iinkcazo ezininzi. Ke, i-Emirates ye-airlines yomsebenzi ukuba ilungile kuwe. Ungazilawula kwisicelo esikhawulezileyo kwi-intanethi. Ndiyathemba ukuba uya Fumana iziphumo ezifanelekileyo Kwimisebenzi yeenqwelomoya e-Emirates kwinkampani yeDubai City. Cofa apha ngezantsi igama lenkampani kunye nekhonkco lesicelo.
Sebenzi yaseBritish Airways
Imisebenzi yaseArabic Air
Umsebenzi we-Air India
Hamba imisebenzi yomoya
Imisebenzi yaseKatar Airways
Kutheni kubalulekile ukufaka isicelo kwi-Emirates Airlines Careers?
Kule mihla, baninzi abafuna umsebenzi. Ukujonga kwimisebenzi ehlawula kakhulu. Kwaye ziinkampani ezinkulu kuphela ezinikezela oko. Amathuba aphezulu e-10 Emirates Airlines Careers. Ngaba lula ngaphezulu kwe- $ 150,000 ngonyaka. Inkampani yaseDubai City iqasha kunye nabaphetheyo. Ngapha koko, silapha ukukunceda. Njengombandela wenyani, i-Emirates iza ngaphezulu nditsho nokubhabha eDubai. Iqela lethu lijonge phambili ekuncedeni ukukunceda ube ngumsebenzi wabo. Kuba kuzo ishishini Kukufumana abantu abaninzi kangangoko banakho. Ukuthetha jikelele, ukufumana imisebenzi emangalisayo kuthatha ixesha. Ngaphezulu kwe-80% yemisebenzi yeAirlines. Kuya kufuneka ufunde izakhono ezininzi. Omnye wemizekelo zizakhono zenkonzo yabathengi kunye nabaphathi bezemali. Kanye nabasebenzi. Ke amakhulu eenkampani ezinokubakho onokukuqesha uya kufuna ukukuqeqesha.
Kodwa siya kukhetha abambalwa kubo. Kuba siyazi ukuba ukuba uza kuhamba kunye ne-20 ephezulu okanye i-30 yazo. Kwaye ngale ndlela yakho ithuba lokufumana umsebenzi eDubai liyakonyuka. Kwaye njengoko thina indawo iinkampani eziphambili. Akukho nto yothusayo yokuba eyona ilungileyo isekwe kwi-Middle East. Ewe kunjalo eQatar ISaudi Arabia I-United States kunye. Iindiza ze-Emirates imisebenzi kwiNkampani yaseDubai City iya kuba sesona sivumelwano sakho.
Indlela yokuphila kunye nomgangatho wemisebenzi
Njengomsebenzi onokubakho kolu hlobo lweenkampani. Unako ukuvelisa umvuzo omkhulu kwaye uqale ubomi obumangalisayo. Imali yakho ngokuqinisekileyo kuya kukhula kwaye iindleko zokuphila ziya kuncipha. Kunzima ukutsho ukuba zeziphi iinkampani ezilungileyo. Kuba bonke babonelela ngeenkonzo ezimangalisayo kubathengi babo. Njengabasebenzi kunye nenqanaba lolawulo lwenkcubeko esebenzayo. Ke masiqale kwimisebenzi esisiseko.
Inkampani yaseDubai City kwi ukunqunyulwa kufutshane kwabasebenzi. Ukubonisa amanqanaba aphambili eshishini leAirlines. Ukusuka kwindlela entsha yokufumana imali kumashishini. Yonke le nto ifuna abantu abafuna umsebenzi. Inqanaba nje lokushishina ngumahluko. Jonga apha ngezantsi kumacandelo ahlukeneyo. Ngokwakho unethemba lokuba uya kuyenza Fumana okuninzi ngakumbi kolu hlobo lweshishini.
ImiSebenzi yokuSebenza ngeeNqila ze-Emirates
Uya kumangaliswa. Malunga nemali oyakufumana ngayo ngelixa usebenza kwimigangatho yamanqanaba okungena. Ingakumbi ngeNqwelo moya imisebenzi yeemoto. Ke, ngokuthetha nje, ezona zinto zisisiseko zomsebenzi zinokufumaneka kwisiXeko saseDubai esimangalisayo. Ngaba imisebenzi yokucoca, ukugcina izindlu kunye nenkonzo yabathengi. Kwaye elinde abathengi be-tale. Njengombandela, inyani yabasebenzi beenkonzo ezisisiseko zilungile ukuba zihambe. Kwelinye icala, sikukhangela kancinci kancinci. Yimisebenzi enetikiti lokuthengisa kunye nabasebenzi bezinto eziqhelekileyo. Njengomntu othengisa ngeendiza iiofisi kunye nolawulo lweofisi.
Umzekelo, unokufumana ngokwakho kwaye uqale ukuthengisa iinkonzo kwi-intanethi. Linye kuphela icala elifanelekileyo kwi-intanethi ebelikhula. Ke, uya kuba indawo elungileyo nehle yokusebenzela. Ke masicinge ukuba ungasebenza eofisini. Kwaye kwixesha elide, unokuba ngumsebenzi omtsha. Umzekelo, qala ukubeka iinkonzo ezisisiseko kakhulu. Kulunge kakhulu amathuba emisebenzi kwinqanaba lokungenela yemisebenzi iyaqasha iimoto. Kuba ngoku Airlines iinkampani ezisebenza namanye amafemu eTurkey.
Imisebenzi yezinga lokungena ngaphakathi kwiCandelo
Kukho ngaphezu kwekhulu leenkonzo nganye nganye iinkampani onokuthi usebenze kuzo. Omnye wemizekelo yoko kukunceda abanye abantu abadala kwiimeko ezininzi luhlobo lomsebenzi. Kungenxa yokuba kunzima ukwenza ukuba ayinguye wonke umntu oya kuthi asebenzise ithuba ukuyenza. Ukucoca iitafile kunye nokukhupha inkunkuma. Okanye uprinte umgangatho. Yiyo imisebenzi ongayilindela inqanaba lokungena. Ewe kunjalo, ukuba unayo imfundo emangalisayo ungaqala njengomphathi woqeqesho. Kwaye unale nto engqondweni, umvuzo wakho uya kukhula kancinci. Kodwa uya kukwazi ukuhlawulela into elungileyo kakhulu. Ngokukodwa imivuzo kwisixeko saseDubai e-Abu Dhabi. I-Emirates imisebenzi yeenqwelo moya kunye nenkampani yeDubai City Inkampani ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuba ihambe.
ImiSebenzi yoLawulo lweMidiya yeeMidiya
Inqanaba elilandelayo emva kwenqanaba eliphakathi eliphakathi amathuba olawulo. Kwaye kolu hlobo lwemisebenzi, uyimeko efanelekileyo. Kodwa kufuneka ukukhulisa imisebenzi eDubai. Ngenxa yeAirlines Industries. Ndiyakukhulisa kwaye ndilindele ukukhula kwixa elizayo. Ke baya kukunika esi sikhundla se-4 ejikeleze iminyaka ye-10. Kwaye kukunceda uphumelele. Nasiphi na isimo sengqondo oya kuyidinga ukuba ukhonze abathengi. Kuba uya kuba phakathi kwenqanaba lokungenela kunye nabaphathi abaphezulu kunjalo. Ndidinga ukunika ingxelo kwiibhodi zomlawuli. Njengabaphathi babasebenzi, abaphathi bezentengiso, abalawuli bokusebenza. Bonke abo bantu baya kujonga imisebenzi yakho. Kwaye ukukunceda ubaleka imini yonke. Kwelinye icala, abantu abaphantsi kweliso lakho babethetha. Kuya kufuneka kulawulwe nguwe. Ke lixesha elininzi lokutshintsha.
Abaphathi kwii-Airlines Industries
Ke masicinge ukuba uza kusebenza iiyure ze-8. Eminye emibini uyithatha uyithwele umoya yekhaya uya kuvuzwa. Ngaphezulu kwe-80% yabaphathi kwiAirlines Industries. Ukufikelela kwizikhundla zenqanaba lomlawuli ngaphakathi kweminyaka ye-10. Kuba uninzi lweenkampani zinebhongo ngaloo nto. Umlawuli omtsha uqala kwinqanaba lokungenela. Uninzi lwazo luye lwakhombisa izibhengezo zentengiso. Ukuba ngumongameli wabo. Qala njengomncedisi wekliniki kule femu. Ke akukhathaleki nokuba unesiphi na isikhundla sokuba uzibonakalise. Kwaye kukho akukhathaleki ukuba uvela phi kanye ePakistan. Ngaphezulu, uMzantsi Afrika okanye ISaudi Arabia. Okanye iiPhilippines bonke abantu abanethuba ngeNqwelo moya amathuba emisebenzi.
Umgangatho ophezulu weeNkonzo zoLawulo
Uninzi lweenkampani kwihlabathi jikelele. Ngaba okubonelela ngendawo yokuhlala umsebenzi wabo. Amatikiti endiza ukuya ekhayeni labo ukuba angabaphambukeli. Imfundo yabantwana. Kwaye okumangalisayo ugqithisela ubomi Ukuba. Ukongeza, ukukufumana malunga noko kuya kukubonelela ngeelaptop kunye nemidlalo yezemidlalo. Ke, imisebenzi ye-Airlines ilungile ukuba uhambe kwaye ufanele ukulinda. Ukuba u zitshintshe ngeBMW. Okanye kunye neWindows. Kwaye ubungakanani obuphakathi ekhaya bineendawo zokudada. Kuya kufuneka kuthiwe, loo mntu uyazi ishishini. Kwelinye icala, ukuba ufuna ukuqhubela phambili ngaphezulu. Ye CEO okanye kukho nenqanaba eliphakame ngakumbi kunelo. Inqanaba lotyalo mali. Kwaye kukho indawo apho abantu benyanzelisa inqwelo moya. VIP ukuqhuba iimoto abaphathi kunye nokuba nehelikopta yakhe.
Imisebenzi yabaqhubi bemimoya kunye nabaphathi
Ke, ukuba ufuna umsebenzi kunye nendawo yokubhukuda enkulu. Kwaye indlela yokuphila emangalisayo njengezigidi. Ungahlala yifumana kwiNkampani yaseDubai. Kukho ezininzi abaphambukeli abafumana umsebenzi kwilizwe jikelele. Kwaye ukushiya inqanaba eliphezulu lobomi. Ngale nto engqondweni, sithetha ngayo Ma Indiya kwaye Pakistani. Ke ukuba ubuvela kweli lizwe. Ngokuqinisekileyo kufuneka ufumane umsebenzi wokuphatha ophezulu. Kungenxa yokuba kwelinye icala, ukuba ufuna iindlela ezingcono zokukhula. Ungakwazi nokuba ube ngumqhubi. Kukho elinye inqanaba labadala imisebenzi yolawulo kwishishini leenqwelo moya. Ngaphezulu izithuba zomsebenzi ezihlawulelwayo kwihlabathi jikelele. Umzekelo, umqhubi omkhulu oqhuba iitoni zemali. Okanye umphathi wezomsebenzi kunye nomphathi wesithili. Ngaba zombini zenza imali entle kuMbindi Mpuma? Oko, kunjalo, kuvumela ukuba baqhube imoto elungileyo.
Utyalomali-mali kunye nabanikazi be-Airline
Kweli candelo isixa esikhulu semali. Uninzi lwabanini zimali abashishini kunye nabanini bemizi-mveliso yeenqwelo moya abangoonozigidi. Kwaye kunjalo, kukho omkhulu umahluko wobuzwe. Uninzi lwabantu baseMelika ngokunjalo baseKhanada. Ngaphezu koko, amaArabhu asuka kwi IUnited Arab Emirates. Ngabatyali zimali boMbindi Mpuma ngokubanzi. Ukulawula olu hlobo lweshishini. Nokuba nguKuphakama kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid onenxalenye yalonto. Kwaye kunjalo imali eninzi ngaphakathi olu hlobo lweshishini. Ngenxa yokuvezwa kweshishini lamanye amazwe. Wonke umntu uyazi kwaye wenza imali. Inani labantu ukusebenza apho ulwazi lucwangcisiwe. Kwaye asazi nokuba yimalini yeli shishini elenzayo. Yipesenti yabantu abasebenzela urhulumente abayaziyo loo nto ngendlela efanelekileyo.
Iifayili ziqhuba ishishini
Ke ukuze nje ube ngumtyali mali kwishishini lolu hlobo lweshishini. Uya kudinga ukuba namashishini ohlukeneyo kwixesha elidlulileyo. Abantu abaninzi abazi nkqu nomntu. Kwaye ngokuqinisekileyo yimalini abantu ziyenziwa. Yipesenti kuphela yabantu ababizelwe kurhulumente eyaziyo indlela esebenza ngayo yonke le nto. Ke, ukuze ube ngumtyali mali kwishishini ngohlobo lweshishini. Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka ube namashishini ohlukeneyo kwixesha elidlulileyo. Ngenxa ye utyalo-mali ubume. Kwaye, sebenza kolu hlobo lwesivumelwano. Ifuna amava amaninzi. Kodwa kufuneka uqinisekise urhulumente kunye nezihloko kunye nabanye abatyali babucala ukuba ungumntu olungileyo.
I-1 Emirates Group Careers
Iqela le-Emirates kukuqesha abafuna imisebenzi. Ewe, ukuza kuthi ga ngoku le nkampani yeyona firm enkulu. Kwaye unale nto engqondweni, kuya kufaneleka ukufumana ukufumana umsebenzi kubo. I-Emirates liqela leenkampani. Ke, lo gama nje usenza isicelo kube kanye. Uya kuyifumana isicelo sakho kunye neenkampani ezininzi. Ethubeni, kuyakufuneka. Le nkampani iyathetha ngokubanzi yeyona nkampani ibalaseleyo kwi-United Arab Emirates. Umzuzu uqala kwakho ngale nkampani. Uya kuziva Amandla e-Dubai kunye ne-Abu Dhabi nefuthe kwishishini.
ImiSebenzi yeXXMUMX FlyDubai
Fly Dubai ngokuqinisekileyo kananjalo yenye yemibutho eqhubela phambili. Nge-flydubai unokuthetha ngokubanzi ubhalisela izilumkiso zomsebenzi. Ukongeza idatha yakho. Ngapha koko, ubhalise iCV yakho. Kwaye nokuba ujonge izibonelelo nenkcubeko. Ngokuthetha ngokubanzi ukuba ufuna inkxaso. I-Emirates imisebenzi yeenqwelomoya ngeenkampani zeDubai City ngumbono onobulumko. Ngokuqinisekileyo, Le nkampani ifuna ukukunceda. Ukongeza, kwaye kuya kufuneka ulayishe ukuphinda kwakho okuhlaziyiweyo apho. Kwaye usete ezinye izilumkiso zomsebenzi. Kuba le nkampani ibiya kukubeka ethubeni.
I-3 Air Arabia Careers
I-Air Arabia ibonelela ngemisebenzi enomdla. I imisebenzi ebonelelwa yinkampani imisebenzi ebonelelwa kwihlabathi liphela. Ngelixa ufumana umdla wakho kwizibonelelo zomsebenzi. Ngokubanzi, inkampani yase-Arabia Arabia iya kukuqesha. Ngapha koko, iinkampani zabaphathi be-HR zikunqwenelela okona kulungileyo ukukhangela umsebenzi. Ukuqala ngabo kufuneka ucofe isicelo. Emva koko wanyula nasiphi na isikhundla. Emva koko, ekugqibeleni, unokucofa kwiqhosha elithi Faka ngoku. Unokuba nomsebenzi we -hift change. Njengabaphathi beentengiso eSaudi Arabia kunye nonjineli isikhundla eTurkey. KuMbindi Mpuma okanye eYurophu. I-Emirates iinqwelomoya i-ccareer nenkampani ye-Air Abarbia. Ngokuqinisekileyo iya kuba licebo elilungileyo.
Iimoto zee-Emirates ezinomsebenzi - I-Air Arabia Careers
Imisebenzi ye-4 Air India kunye neMisebenzi
I-Air Arabia ibonelela ngemisebenzi enomdla. Imisebenzi ebonelelwa yinkampani imisebenzi ebonelelwa kwihlabathi liphela. Ngelixa wena Fumana umdla wakho kwizibonelelo zomsebenzi. Ngokubanzi, inkampani yase-Air Arabia eqesha abasebenzi abatsha. Ewe kunjalo nakwi-United Arab Emirates. Emirates imisebenzi yeenqwelo moya kunye neNkampani yeDubai City yintshukumo elungileyo. Okwangoku kufuneka ukhuphele iifayile. Ukongeza, jonga iziqwenga zolwazi malunga nomsebenzi othile. Kwaye ke ufake isicelo kule nkampani.
ImiSebenzi yoMsebenzi we-Air kunye neCandelo lika-5
Inkampani yeWizz Air eqesha nakwimisebenzi yeenqwelo moya ze-Emirates. Ngokubanzi, banikezela iintlobo ezintathu zemisebenzi. Eyokuqala ithuba lomsebenzi unokufumana kunye nasePoland. Ngaba amakhabhathi abasebenza kwiikhabhathi. Kwelinye icala, uya kuba nemisebenzi yaseofisini. Kwaye iya kuba yiyo Ukusebenza kwabasebenzi, isebe lezentengiso. Ngokuqinisekileyo ngalolu hlobo lwemisebenzi kwiimeko ezininzi, uya kusebenza ngamaphepha kunye neekhompyuter. Kwaye ukhetho lwesithathu kunye neWizz Air kukuba ngumqhubi wenqwelo moya. Ngokubanzi, le yenye yeenkampani ezilungileyo. Kuba abaqhubi beenqwelomoya babo babhabha bephuma kwizixeko zabo. Kwaye kunjalo, inkampani Inika inkxaso epheleleyo kunye noqeqesho kwimeko yezomthetho. Ke inkampani yedolophu yaseDubai ikucebisa ukuba ufake isicelo sale nkampani. Iqela lethu likholelwa kakhulu ukuba kuya kufaneleka yonke imizuzu nale nkampani. I-Emirates yeenqwelomoya yeenqwelomoya nge Umsebenzi weWizAir Iwebhusayithi iza kuba kuhle ukuqala.
I-6 yaseBritish Airways Careers
Enye inkampani kwimisebenzi yeenqwelo moya ze-Emirates. Ngeli xesha kunye United Kingdom Inkampani. IBritish Airways yinkampani enkulu, eqesha eLondon, eDubai nakwisiXeko saseNew York. Ke, ukukhangela Inkampani elungileyo yindlela yokusebenza ukwenzela bona. Le nkampani, iyathetha ngokubanzi, iqasha kwisikhululo seenqwelomoya iHeathrow. Ishishini laseBritane linamandla okwenza amava abathengi angalibalekiyo. Ukuba iprofayile yakho iyahambelana neemfuno zabo. Naphi na apho basebenza khona, emhlabeni okanye emoyeni. Unganako ithuba elihle kunye nabo. Nokuba unamava olawulo okanye umntu ophumeleleyo. Okanye usaqala umsebenzi e-UK kuya kufuneka uzame umsebenzi wakho weBritish Airways.
I-7 Etihad Career Airways
Ukusuka kwiikhabhathi zemisebenzi ukuya kwisicwangciso-qhinga nokucwangcisa imisebenzi kunye nemisebenzi yolawulo umqhubi oza kuyifaka kwaye abathwali bezentengiso benza le nkampani ngokuqinisekileyo iza kubonelela ngamathuba okukhula ngokugqwesileyo ne-United Arab Emirates. Iza kusebenza kakuhle kakhulu eDubai nase-Abu Dhabi. Kwaye ewe, ishishini lisekwe kwiZiko leshishini lokwamkela iindwendwe phakathi kwe-Middle East. Ukuba unomdla wokunceda abantu. Ngokuqinisekileyo le nkampani yenye yezona ndawo zingcono zeqela labasebenzi. Unokufumana umsebenzi wokuba ngumqhubi wenqwelomoya okanye i-SFI amathuba emisebenzi.
I-8 Imisebenzi ye-Airline yaseNorway
INorway yenye Qiniseka ukuba uyasebenza. Kuba lo mbutho yenye yezona nqwelomoya zintsha ehlabathini. Ngapha koko, ngaphezulu kwe-260 iindiza zomoya ziyalelwa. Ke, ngokusekwe kuloo manani. Kuya kuba njalo Nxibelelana nabamele abaphathi beHR. Umoya waseNorway uya kulawula isicelo samakhulu amaninzi okuvulwa kwenkampani ngaphakathi kwenkampani kungekudala. Oku kuthetha ukuba inkampani ifuna abantu abaninzi ukuba bajoyine Intsapho yaseNorway. Kwaye ke, ukuba ungomnye wabo. Hamba uye ubhalise iinkcukacha zakho Iinkampani zee-Emirates ezinxulumene nomsebenzi kunye ne-Dubai City Inkampani.
I-9 GoAir Airline Employment
Ke ngoku eli xesha siphonononga liya Indian Inkampani Le nkampani yi Inkampani elungileyo kakhulu eIndiya igama layo liya Airlines India limited. Kukuphanda kwamaqela amaIndiya kwaye umsebenzi wawo kukubonelela ngokhuseleko olukhuselekileyo nolusebenzayo. Bonke abasebenzi kunye nabathengi. Kanye ngalo lonke ixesha bona Ukugcina ingqalelo kwimisebenzi edibeneyo kunye nokujongana nabathengi babo. Kwaye bayakwazi ukwenza inkonzo eyahlukileyo. Ngokubanzi, ngabantu abohlukeneyo kunye nomgqatswa wabo.
Enye inkampani ephononongwa kwifilimu yethu yi-KLM le Inkampani iyasebenza abayili bezakhiwo kunye nabasebenzi basemhlabeni kunye nabantu abanamava amahle okuthengisa. Unokuseta zonke iindlela zokuthetha ngokubanzi malunga nokuqaphela kwaye unokufumana imisebenzi kwiindawo ezahlukeneyo. Kanye ne-USA Yurophu Khanada kwaye njalo, njalo, siyathetha. Sicebisa ngamandla ukuba sizame ukufumana lo msebenzi. Isenokuba njalo kunzima kakhulu ukuyifumana ivela eIndiya kunye nePakistan. Kodwa kuya kuba lula kakhulu ukuyifumana eDubai naseMzantsi Afrika kwaye ngokuqinisekileyo kubasebenzi bamazwe aphesheya. Ndizokufumana umsebenzi kwaye imivuzo emnandi ibiya kuhlawulwa.
I11 Virgin Atlantic
Ngoku lixesha lokuba iVirgin Atlantic yeyona nkampani ibalaseleyo emhlabeni ukubonelela ngamathuba amaninzi ukusuka kwinkonzo yabathengi umzekelo ukusuka kwiinkonzo zesikhululo seenqwelomoya ukuya kwiziko lenkonzo yabathengi. Unokufumana kunye nawo onke amathuba amahle abanawo. Unga soloko ufumana umsebenzi kwiofisi eyintloko. Kwisikhundla sokuphatha, ungayijonga le nto Yomelela kwaye uza kusebenza kwakhona emva kwezikhuko ukuba ungumntu onetalente uneendima ezahlukeneyo. Kwelinye icala, sinemithwalo yemoto ukusuka kwii-supercars ukuya kuthi ga kumava okuqhuba kwaye uya kuyenza. Kwaye ukuSebenza kobunjineli obuya kubakho kunye nezifundo.
Kwelinye icala, Uya kuba nesikhundla sobunkokeli. nale nkampani, uya kukhokela kwaye unike umvuzo abantu abaziphuhlisayo. Kwaye ke sinobunjineli kunye nokusebenza. Ngokuqhelekileyo, ukuwufumana ngokufanelekileyo lo msebenzi. Uya kudinga ukuba unesidanga sobunjineli. Kwaye uninzi lwemisebenzi luya kubanjelwa eLondon. Kwaye ke sinabaqhubi benqwelomoya elizayo kunye nabantu abaphaphayo. Umzekelo, bhabha ngeenqwelomoya.
Amathuba omsebenzi we-12 Jet Airways
I-Emirates imisebenzi yeenqwelomoya ngeJet Airways. Well, Jet Airways kunjalo ndibhabha emhlabeni wonke. Ungafumana ezininzi zeArkansas nale nkampani. Kwaye maninzi amathuba. Umzekelo, unokufumana ukusebenza okuphezulu kwendiza, phantsi kwamathuba emisebenzi. Njengegosa lokuqala. Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kwelinye icala sinolawulo lweNgeniso ngokunjalo Ulawulo lomsebenzi ngaphakathi kwinkampani. Kwelinye icala, unokufumana imisebenzi yokonga. Kanye nokusebenza kwenkonzo yabathengi.
Ke masijongane nayo yonke imisebenzi eza kubonelelwa yinkampani. Ngaba kufanelekile ukuba uzifumane. Kuba nangona ufumana isikhundla esiphezulu. IJet Airways yinkampani enkulu kakhulu. Ukuba baya kukubonelela ngamathuba ngakumbi nangakumbi. Ngaphezu koko, unokuziqeqesha. Kwaye babe ngabalawuli abanobuchule kakhulu. Ke, inkampani yedolophu yaseDubai inceda abathengisi. Ukufumana kunye nabo cofa kumfanekiso ongezantsi. Ukuthetha jikelele, Le nkampani ilungele imisebenzi eMumbai. Ke ukuba ungusomashishini waseIndiya. Ngokuqinisekileyo kufanele uthumele i-CV kule nkampani.
I-13 i-Kuwait Airways Careers
I-Emirates imisebenzi yeenqwelo moya kunye nomsebenzi we-Kuwait Airways. Enye inkampani esingathanda ukuyijonga kwakhona. Ngaba Kuwait Airways. Kuba apho unako Vavanya inkcubeko yomdibaniso. Ngapha koko, inkampani ibonelela ngezithuba ezininzi. Umzekelo, izithuba zemisebenzi jikelele zabasebenzi bamanye amazwe. Yiza ke ukuba ujonge ukuba ngumqhubi wenqwelo moya onokuqala kule nkampani. Kwelinye icala, ukuba uthanda ukufumana amathuba emisebenzi yemali okanye Itekhnoloji yequmrhu yezemali izithuba uyakwazi ukufumana umsebenzi nazo. Kwaye ekugqibeleni sinayo imisebenzi yabasebenzi kunye nokusebenza. ngokwenyani, le nkampani iqesha kwanesikhundla esiphezulu sokuphatha. Inkampani yedolophu yaseDubai ngokuqinisekileyo iqhuba abafuna umsebenzi kule webhusayithi. Kuba sonke siyayazi imisebenzi esinokubonelela ngayo. Umhle ngokwaneleyo ukuba ukwazi ukuzilawula kwaye wenze isixa semali esihle.
Imisebenzi ye-14 Air Malta
Enye inkampani esithanda ukumazisa yona yiMalta yomoya. Le nkampani, ngokubanzi, ukuqeshwa lisuka kwilizwe elincinci eYurophu. Kodwa ngumbutho omkhulu. Kwaye ngokubanzi ukuthetha kuhle kakhulu ngalo naliphi na ixesha. Ke, ukuba ungathanda ukufumana inkampani kwaye indawo entsha yokusebenza. Zama umbutho woMoya weMalta. Masikukhe uthande iYurophu kwaye uyokusebenza eMalta. Ngokuqinisekileyo kukunika isiqalo esihle. Inkampani yedolophu yaseDubai ihlala ijonge phambili. Ukunceda abafuna umsebenzi kwaye sinebhongo ngomntu ngamnye omtsha. Ngaba ubhalisela ntoni inkampani yethu? Okanye nakweyiphi na iMisebenzi yeenqwelo moya yeEmirates.
ImiSebenzi yeXXMUMX eQantas
Umsebenzi kwiQantas Airlines. Omnye inkampani elungileyo kakhulu ukuba usebenzela. Kwaye ayisiyo kuphela i-Emirates Airlines Careers. Ukulunga kwabasebenzi, kuninzi nezinye iinkampani. Ngale nto engqondweni, abafuna umsebenzi bajonge ukuba yinxalenye yeqela leQantas. Kodwa akukho lula oko, kwiimeko ezininzi kufuna ukusuka kumalungu amatsha emigangatho yokuphakama. Ke ngoku ukuya kwimiceli mngeni eyahlukeneyo. Le nkampani iza kusebenza kwindawo enzima kakhulu. Uninzi lwabantu okhuphisana nabo basebenza kwiimarike zeAirlane. Kungenxa yesi sizathu le nto uQantas ehlala elindele lukhulu kubasebenzi. Njengombandela, abaphathi balindele ukufezekisa oko kungenakwenzeka. Kwicala elifanelekileyo, inkampani ihlala ixhasa abaphathi beqela labo. Uqeqesho kunye nokufundisa Lukhangeleka njani ubunkokeli obulungileyo. Ngapha koko, indlela yokuthemba nokucebisa abanye ngentlonipho. Jonga apha ngezantsi.
ImiSebenzi ye-16 e-Aegean
Umbutho weAegean, enye ifemu yeEmirates Airlines careers. Ngokubanzi, le nkampani isebenza ukusuka kwinqanaba eliphezulu. Umsebenzi wabo kukwenzela ubuncinci umgama phakathi kwabathengi kunye nabasebenzi. Bakho ujonge ukukusondeza kule nto ufuna ukuyifumanisa. Kwelinye icala, bebaninzi abaHambi kunye neendinyana kwaye bezama ukubonelela ngenkonzo ngokuqhubekayo kwinqanaba eliphezulu. Olona luvo luphambili kukuhlonipha nokuphuhlisa ukuthengisa. Kananjalo ukuvelisa abasebenzi kunye ukunceda ukuxhasa amaqabane abo kwiindawo zasekuhlaleni.
Kukho ngaphezulu kwe-12 yezigidi zabagibeli ukusukela kwi2012. Ukubhabha ngaphezulu kweendawo ze-145 kunye Benza ngaphezu kwe-1 yezigidi zeerandi. Kumazwe e-45. Ngaphezulu i89% yombutho kwaye inceda ngendawo ekhuselekileyo. Inkampani yi-Star Alliance iqabane kwaye babeka imali eninzi kutyalo-mali. Ke izikhundla zakho ziya kufumaneka kungekudala. Kwaye ngokuza kwabasebenzi ukuba inokuba yinto enkulu yokukhula.
Imisebenzi ye-17 kwi-Austrian Airlines
IAustralia Airlines ikwangabadlali abaphambili kwimarike. Ngelo xesha Inkampani eqeshisa ngamabala aliqela okuhlala. Ngale nto engqondweni, kukuhambahamba njengearhente yenkonzo yabakhweli, umqhubi wenqwelomoya, imisebenzi yezobugcisa, iofisi eyintloko kunye nokuqeqeshwa ngaphakathi. Kwelinye icala, Inkampani ibonelela ngeengcebiso ezininzi kunye nezikhokelo ongayisebenzisela amaKhondo eeNqwelo moya aEmirates. Omnye wemizekelo iAustralia Airlines enayo iyamangalisa blog. Babhala ngeqela labo malunga neFleet yabo nangomqhubi wabo kunye neenkonzo. Ewe kunjalo, ijongeka imangalisa kwaye ngokuqinisekileyo abantu abaninzi banokufumana ixabiso kule bhlog. Ke yiba ncinci kwaye ucofe umfanekiso oza kukusa kwiphepha labo. Ngokuqinisekileyo yiya phambili kwaye ufake isicelo somsebenzi kwaye uzame ukufumana umsebenzi ngokwakho.
Imisebenzi ye-18 kwi-Airways yaseMzantsi Afrika
Ukufumana umsebenzi yeyona nto ilula. Enye inkampani esithanda ukuyijonga kweli nqaku. Iinqwelomoya oMzantsi Afrika zithetha nje le nkampani ibhaso elininzi liphumelele ibhanoyi. Eyona ofisi iphambili eseHarrisburg eMzantsi Afrika. Inkampani ekhonza indawo ye78 kwihlabathi liphela. Kwicala elibi akukho lula ukuba udibane nale ndiza. njengoko enye yezona ntlawulo zibalaseleyo zeAirlines. Uninzi lwabantu luzama ukufumana umsebenzi kunye nabo. Kwaye kufuneka sikhumbule ukuba uMzantsi Afrika akukho lula ukufumana ivisa. Ke kuya kufuneka uqhubeke rhoqo kwiveki. Kwaye zama ukufumanisa malunga nezithuba zabo ezikhoyo. I-Emirates imisebenzi yeenqwelo moya kunye nesikhokelo seNkampani yaseDubai City isikhombisi seams smart ukuqala ngale nkampani.
ImiSebenzi ye-19 yaseLufthansa
Inkampani yaseLufthansa ngokwenyani ayifanelanga ukuba yaziswe kuye nakubani na. Ngokuqinisekileyo lelinye lawona mdlali mikhulu kumzi-mveliso weenqwelo moya. Kwaye ngalo mzuzu le nkampani inayo itoni yemisebenzi ukusuka kwingcaphephe ye-IT ukuya kulawulo nkqu nolawulo oluphezulu lwemisebenzi. Umphathi wabathengi kunye nomncedisi wokucoca. Ngale nkampani ngokuqinisekileyo, unokufumana phantse nawuphi na umsebenzi. Elinye icala elibi likhona udliwanondlebe olunzima ukuba uludlulise. Kwicala elifanelekileyo, unokufumana iwebhusayithi yabo yenziwe kakuhle. Kwaye unokujonga imeko yakho yesicelo kunye nedatha yobuqu. Nokuba ubhaliso lomsebenzi lubonakala ziyafumaneka kwabo bafuna umsebenzi. Unoku engqondweni, I-Emirates yeenqwelo moya zisebenza ngeNkampani yeDubai City kuba ndikwakhona.
Sineendawo kuphela zenkampani ezantsi koluhlu. Kungenxa yokuba yinkampani yaseYurophu, yiyo loo nto ke isenokuba nzima ukufumana iVisa eYurophu. Kwicala elifanelekileyo, le nkampani ikwafihla kuMbindi Mpuma naseYiputa. Kwaye amanye amazwe aliqela esingakwaziyo ukuwajonga okwangoku. Ngokuqinisekileyo i-United Arab Emirates, Khwatha I-United States yaseMelika.
I-20 Singapore Airlines Careers
I-Singapore Airlines ayingobantu abaninzi abalapha malunga nale nkampani. Kodwa le nkampani inokuphuhliswa kobungcali kwiminyaka yokugqibela ye-20. Olona luvo luphambili ukunceda abasebenzi bafezekise ukukhula kwabo ngokupheleleyo. Kutheni uzosebenza nabo uya kuthi kwaye ubanzi kwaye uphuhliso lubonelela ngakumbi kule nkampani uya kuphucula ubuchwephesha bakho ukuze ufumane. Kwaye wonke umntu ongathanda ukuqala ngabo.
Inkampani ibonelela ngeziqinisekiso zemfundo eziphakamileyo. ngokubanzi, ukuba ufuna inkampani ngubani oza kukubonelela ngenkxaso-mali ye-visa. Ngokuqinisekileyo, iSky Airlines iya kukwenzela loo nto. ayisiyonto efanelekileyo kwimisebenzi yeenqwelo moya yeEmirates. Kodwa ngokuqinisekileyo kufanelekile ukufaka isicelo njengomntu ofuna umsebenzi. jonga apha ngezantsi kwiwebhusayithi yabo nawe zigqibe ukuba iyakuxabisa na okanye hayi.
I-20 Qatar Airways Careers
Qatar yeendiza zase-Emirates imisebenzi eMbindi Mpuma. Amakhulu ngamathuba akhoyo ngoku eQatar. Le nkampani yaziwa ngokungqonge iClock bajongana ngokwenyani ukulungiselela abaphathi kunye nophuhliso lweshishinis. Iqela lobunjineli bobuchwephesha kunye neenkonzo zeenqwelomoya abasebenzi Kwicala elifanelekileyo lale nkampani, ungakhangela kwisicelo sakho. Cwangcisa izilumkiso zomsebenzi ukuba uza kuba nomdla kwizithuba ezizayo. Kuba ngelo xesha akunakubakho ukukunikeza umsebenzi uwujongile njengomfazi.
Ngokwenyani, zizizo kuphela ezinikezela njengexesha elizayo ithuba lokucwangciswa kwamakhono kwiwebhusayithi. ngokuqinisekileyo kuya kulungelwa ukuya phambili kwaye ufake isicelo okungenani i-50 ukuya kwizithuba ze200. Kwicala elingalunganga, le yi-Qatar ngenxa yoko akukho lula ukufumana umsebenzi. Ezininzi abantu kwihlabathi jikelele bafuna ithuba elimangalisayo kweli lizwe. Ke kuyakufuneka ulwe namaIndiya, iPakistan, kunye nabanye abameli babaphathi boMbindi Mpuma.
Isiphelo se-Emirates Airlines Careers
Kweli candelo, senza umqukumbelo. Ke uninzi lwabantu olujonge ukufumana umsebenzi kwiLightline ekhula ngokukhawuleza. Ngokubanzi ukuthetha imisebenzi emininzi bendikunikezela njengomqhubi wenqwelomoya nakwizinto zomhlaba. Iindiza iinkampani zizanywa kwaye zanda ngokukhawuleza inethiwekhi. Kwaye ngakumbi iinkampani kwi-UAE. I-United States yaseMelika kunye neYurophu ukuza kuthi ga ngoku kunye nokukhula ngokukhawuleza kweenkonzo zesikhululo seenqwelomoya. Njengomcimbi, kunye nolu hlobo lweshishini. Ungakhangela imisebenzi ekhoyo kumacandelo amaninzi. Ukuza kuthi ga ngoku ufumana isicwangciso kunye nemisebenzi yokucwangcisa.
Imisebenzi yesikhululo seenqwelomoya kunye nomsebenzi wenethiwekhi. Imisebenzi yokusebenza kobugcisa kunye nohlobo olufanayo lomsebenzi. Ukhuseleko kwisikhululo seenqwelomoya yinto enkulu kakhulu. kwelinye icala, sinemisebenzi esemgangathweni. Ucwangciso lolondolozo lweenqwelomoya kunye neLogistics. Ke imisebenzi yezorhwebo neyorhwebo nayo kufanelekile ukuyifumana. Ukucacisa uninzi lwemisebenzi kukunikwa kwenkonzo yabathengi. Ke ungumsebenzi kuyakufuneka ugqithise kulindelo lwabathengi kwiSikhululo senqwelomoya.
I-Dubai City Inkampani yabathengi beJob
Inkampani yaseDubai City ijonge ukukubona kumanqaku ethu ahlukeneyo. Ibhlog yethu yenzelwe ikakhulu abaCeli bomsebenzi. Ukuza kuthi ga ngoku ufumana ezonainkampani zintle anokusebenzela kuzo. Ngethemba, ufake isicelo kuzo zonke iinkampani esibonelela ngazo. Kuba siyinkampani yokufumana umsebenzi kwaye sifuna umsebenzi ukunceda abanye ekufumaneni imisebenzi emangalisayo. Inkampani yethu isekwe eDubai. Yiyo loo nto sibeke i-Emirates. kwaye sinebhongo kakhulu ngeli shishini. Ngaphaya koko, sincede ngokwakha iimveliso ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Ke, yiba yenye uninzi lomsebenzi wethu Abafuna umsebenzi kwilizwe jikelele. Ukuza kuthi ga ngoku sincede abo bafumana imisebenzi eSaudi Arabia. Kwaye ngokunjalo ne-Indiya-Pakistani njengenombolo yokuqala. IPhilippines kunye Abantu baseMzantsi Afrika kunye nabemi base-Irani kunye nabemi baseMelika.
Ndikhangele phambili ukukubona kwakhona!
Inkampani yethu inelunda kakhulu ngomthengi ngamnye wethu. ngaphezulu Abafuna umsebenzi be-50,000 bafumana umsebenzi yinkampani yethu. Yenziwe ngalinye kwicandelo ke ukuba sithetha ntoni kuloo nto. Ngabaunjineli urhwebo, Imicimbi yabasebenzi, ubuhlengikazi, yona, inkonzo yabathengi kunye nokufundisa. Iinkonzo esibonelela ngazo kumazwe angaphandle. Nokuba yintoni na othatha isigqibo sokuba hlobo luni lomsebenzi othanda ukulufumana kunye nenkampani yethu. Sijonge ukukunika oko. Ke qhubeka kwaye wenze uphando kwiwebhusayithi yethu. Kuba sinezinto ezininzi ezinokukusebenzela. Njenge ofuna umsebenzi kwihlabathi liphela.